Yangu LG TV chete ine USB 2.0 chiteshi - MediaLight Bias Mwenje
Iwe unoziva, isu tinoda kuve nhunzi pamadziro kumisangano yekushambadzira kune vamwe vevagadziri ava.
"Ngatigadzirei OLED TV uye ingoipa USB 2.0 chiteshi."
- Imwe LG chigadzirwa dhizaini
Pane mhinduro shoma padambudziko iri, asi isu tinoda kuziva kuti unozoshandisa sei mwenje yako kutanga.
Kazhinji, chero MediaLight Mk2 unit 1-4 metres kureba iri pazasi pe500mA (iyo yakakwira yeUSB 2.0) kunyangwe kana yaiswa pa100% pane dimmer. Makuru makuru anotora mashoma amps kana asviba kune mamwe matanho.
Kune akakura MediaLight mitsetse tinogona kutumira yemahara USB yekuwedzera pamwe neodha yako (iwe unofanirwa kuikumbira pakutanga - hapana muripo kana ichiendeswa neodha yako. Kana iwe uchikumbira icho mushure mekunge odha yako yatumirwa kunze, ingo bhadhara mapositi - anenge $ 3 muUSA). Iyo inosimudzira haina kusununguka neLX1. Nekudaro, isu tinogona kuwedzera imwe kune yako odha chete $ 5 ($ 8 kana ikatengwa mushure mechokwadi). (Iyo MediaLight, kazhinji, inosanganisira zvimwe "zvinhu" zvekuwedzera tambo, switch, kure, adapter, clip, nezvimwe. Kana isu tikazvisanganisira zvese neLX1, zvaizoda mari zvakada kufanana neMediaLight).
Iyo inosimudzira inosanganisa simba reaviri USB 2.0 madoko ekupa inosvika ku950mA yesimba - yakakwira dhizaini kunyange iyo 6m Mk2 Flex pa100% kupenya.
Takamboita kuti vamwe vanhu vabvunze kuti "wadii kungoisa inosimbisa magetsi nezvose zvayakaudzwa, pane kuda kuti tiverenge saiti?"
1) Vanhu vazhinji havade iyo inosimudzira magetsi uye hatidi kuwedzera mutengo weMediaLight. Isu tinosarudza kungopa iyo yekuwedzera chikamu yemahara pane inodikanwa hwaro.
2) Kuverenga saiti usati watenga haimbove yakaipa pfungwa. Tinofunga kuti kana vanhu vazhinji vakaverenga saiti, tinowana maemail mashoma senge "sei ndisingakwanise kutora MediaLight yangu kuti ichinje mavara?"
Vazhinji vevatengi vedu, zvisinei, vanokomberedza saiti uye kuverenga kumusoro, ndomawakauya pano! Woohoo! Vanhu vakakwana senge imi munoziva kuti zvigadzirwa zvedu zvakavimbiswa kuti ndezvechokwadi uye zvinosanganisira zvakakwana zvivimbiso zvinotovhara zvimisikidzo zvakatemwa. Ndatenda nekuverenga pano!